၂၀၂၀ ဇူလိုင်လအတွက် နေ့သားအလိုက် အကျိုးပေး ထီဂဏန်းများနှင့် ထီထိုးရမည့်အချိန်အပိုင်းအခြား -
၂၀၂၀ ဇူလိုင်လအတွက် နေ့သားအလိုက် အကျိုးပေး အောင်ဘာလေထီဂဏန်းများနှင့် ထီထိုးရမည့်အချိန်အပိုင်းအခြား
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ – အိမ်ရဲ့ဧည့်ခန်းမှာ ထီပေါက်ဂဏန်းရှိနေပါတယ်။ တနင်္ဂနွေသားသမီးတစ်ဦးနှင့် စပ်ပြီးထိုးပါ။ ကြက်ဥကြော်စားပြီးထိုးပါ။
တနင်္ဂနေ့ နေ့လည်(၁)နာရီ(၃၀)မှ – (၃) နာရီအတွင်း အနီရောင်များများပါသော အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ပြီးထိုးပါ ။ ( ၁ ၊ ၉ ၊ ၃ ) များများပါတဲ့ လက်မှတ်ကို ရှာပြီးထိုးပါ။
တနင်္လာသားသမီးများ – လမ်းဘေးက ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုမှာ ထီပေါက်ဂဏန်းရှိနေပါတယ် ။ အင်္ဂါသားသမီးတစ်ဦးနှင့် စပ်ပြီးထိုးပါ။ ကြာဇံကြော်စားပြီးထိုးပါ ။
တနင်္လာနေ့ နံနက်(၉)နာရီမှ – (၁၀)နာရီ (၃၀) အတွင်း နီညိုရောင်များများပါသော အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ပြီထိုးပါ ။ ( ၃ ၊ ၂ ၊ ၈ ) များများပါတဲ့ လက်မှတ်ကို ရှာပြီးထိုးပါ …။
အင်္ဂါသားသမီးများ – မီးဖိုခန်းထဲမှာ ထီပေါက်ဂဏန်းရှိနေပါတယ်။ ကြာသပတေးသားသမီးတစ်ဦးနှင့် စပ်ပြီးထိုးပါ ။ ကော်ဖီသောက်ပြီးထိုးပါ …။
အင်္ဂါနေ့(၃)နာရီမှ – (၄)နာရီ(၃၀)အတွင်း အဝါရောင်များများပါသော အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ပြီထိုးပါ။ ( ၅ ၊ ၀ ၊ ၇ ) များများပါတဲ့ လက်မှတ်ကို ရှာပြီးထိုးပါ။
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ – အိမ်တံခါးအနီးမှာ ထီပေါက်ဂဏန်းရှိနေပါတယ် ။ စနေသားသမီးတစ်ဦးနှင့် စပ်ပြီးထိုးပါ။ နန်းကြီးသုပ်စားပြီးထိုးပါ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက်(၁၀)နာရီ(၃၀) မှ – (၁၂)နာရီအတွင်း အနက်ရောင်များများပါသော အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ပြီထိုးပါ။ ( ၇ ၊ ၄ ၊ ၈ ) များများပါတဲ့ လက်မှတ်ကို ရှာပြီးထိုးပါ …။
ကြာသပတေးသားသမီးများ – ကားတစ်စီးရဲ့ ကားနံပါတ်ပြားမှာ ထီပေါက်ဂဏန်းရှိနေပါတယ်။ တနင်္လာသားသမီးတစ်ဦးနှင့် စပ်ပြီးထိုးပါ။ ခေါက်ဆွဲကြော်စားပြီးထိုးပါ။
ကြာသပတေးနေ့ ညနေ (၄)နာရီ(၃၀) မှ – (၆) နာရီအတွင်း အဖြူရောင်များများပါသော အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ပြီထိုးပါ။ ( ၂ ၊ ၇ ၊ ၉ ) များများပါတဲ့ လက်မှတ်ကို ရှာပြီးထိုးပါ။
သောကြာသားသမီးများ – ရေချိုးတဲ့နေရာ ၊ ရေချိုးခန်းထဲမှာ ထီပေါက်ဂဏန်းရှိနေပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတစ်ဦးနှင့် စပ်ပြီးထိုးပါ။ ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲစားပြီးထိုးပါ။
သောကြာနေ့ နေ့လည်(၁၂)နာရီ – (၁)နာရီ (၃၀)အတွင်း အစိမ်းရောင်များများပါသော အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ပြီထိုးပါ … ။ ( ၄ ၊ ၁ ၊ ၂ ) များများပါတဲ့ လက်မှတ်ကို ရှာပြီးထိုးပါ။
စနေသားသမီးများ – သတင်းစာတစ်စောင်ထဲမှာ ထီပေါက်ဂဏန်းရှိနေပါတယ်။ သောကြာသားသမီးတစ်ဦးနှင့် စပ်ပြီးထိုးပါ။ အုန်းသီးပါတဲ့မုန့်စားပြီးထိုးပါ ။
စနေနေ့ နံနက် (၇)နာရီ (၃၀) မှ – (၉)နာရီအတွင်း အပြာရောင်များများပါသော အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ပြီထိုးပါ ။ ( ၆ ၊ ၄ ၊ ၃ ) များများပါတဲ့ လက်မှတ်ကို ရှာပြီးထိုးပါ။
၂၀၂၀ ဇူလိုငျလအတှကျ နသေ့ားအလိုကျ အကြိုးပေး ထီဂဏနျးမြားနှငျ့ ထီထိုးရမညျ့အခြိနျအပိုငျးအခွား
၂၀၂၀ ဇူလိုငျလအတှကျ နသေ့ားအလိုကျ အကြိုးပေး အောငျဘာလထေီဂဏနျးမြားနှငျ့ ထီထိုးရမညျ့အခြိနျအပိုငျးအခွား
တနင်ျဂနှသေားသမီးမြား – အိမျရဲ့ဧညျ့ခနျးမှာ ထီပေါကျဂဏနျးရှိနပေါတယျ။ တနင်ျဂနှသေားသမီးတဈဦးနှငျ့ စပျပွီးထိုးပါ။ ကွကျဥကွျောစားပွီးထိုးပါ။
တနင်ျဂနေ့ နလေ့ညျ(၁)နာရီ(၃၀)မှ – (၃) နာရီအတှငျး အနီရောငျမြားမြားပါသော အဝတျအစားဝတျဆငျပွီးထိုးပါ ။ ( ၁ ၊ ၉ ၊ ၃ ) မြားမြားပါတဲ့ လကျမှတျကို ရှာပွီးထိုးပါ။
တနင်ျလာသားသမီးမြား – လမျးဘေးက ဆိုငျးဘုတျတဈခုမှာ ထီပေါကျဂဏနျးရှိနပေါတယျ ။ အင်ျဂါသားသမီးတဈဦးနှငျ့ စပျပွီးထိုးပါ။ ကွာဇံကွျောစားပွီးထိုးပါ ။
တနင်ျလာနေ့ နံနကျ(၉)နာရီမှ – (၁၀)နာရီ (၃၀) အတှငျး နီညိုရောငျမြားမြားပါသော အဝတျအစားဝတျဆငျပွီထိုးပါ ။ ( ၃ ၊ ၂ ၊ ၈ ) မြားမြားပါတဲ့ လကျမှတျကို ရှာပွီးထိုးပါ …။
အင်ျဂါသားသမီးမြား – မီးဖိုခနျးထဲမှာ ထီပေါကျဂဏနျးရှိနပေါတယျ။ ကွာသပတေးသားသမီးတဈဦးနှငျ့ စပျပွီးထိုးပါ ။ ကျောဖီသောကျပွီးထိုးပါ …။
အင်ျဂါနေ့(၃)နာရီမှ – (၄)နာရီ(၃၀)အတှငျး အဝါရောငျမြားမြားပါသော အဝတျအစားဝတျဆငျပွီထိုးပါ။ ( ၅ ၊ ၀ ၊ ၇ ) မြားမြားပါတဲ့ လကျမှတျကို ရှာပွီးထိုးပါ။
ဗုဒ်ဓဟူးသားသမီးမြား – အိမျတံခါးအနီးမှာ ထီပေါကျဂဏနျးရှိနပေါတယျ ။ စနသေားသမီးတဈဦးနှငျ့ စပျပွီးထိုးပါ။ နနျးကွီးသုပျစားပွီးထိုးပါ။
ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ နံနကျ(၁၀)နာရီ(၃၀) မှ – (၁၂)နာရီအတှငျး အနကျရောငျမြားမြားပါသော အဝတျအစားဝတျဆငျပွီထိုးပါ။ ( ၇ ၊ ၄ ၊ ၈ ) မြားမြားပါတဲ့ လကျမှတျကို ရှာပွီးထိုးပါ …။
ကွာသပတေးသားသမီးမြား – ကားတဈစီးရဲ့ ကားနံပါတျပွားမှာ ထီပေါကျဂဏနျးရှိနပေါတယျ။ တနင်ျလာသားသမီးတဈဦးနှငျ့ စပျပွီးထိုးပါ။ ခေါကျဆှဲကွျောစားပွီးထိုးပါ။
ကွာသပတေးနေ့ ညနေ (၄)နာရီ(၃၀) မှ – (၆) နာရီအတှငျး အဖွူရောငျမြားမြားပါသော အဝတျအစားဝတျဆငျပွီထိုးပါ။ ( ၂ ၊ ၇ ၊ ၉ ) မြားမြားပါတဲ့ လကျမှတျကို ရှာပွီးထိုးပါ။
သောကွာသားသမီးမြား – ရခြေိုးတဲ့နရော ၊ ရခြေိုးခနျးထဲမှာ ထီပေါကျဂဏနျးရှိနပေါတယျ။ ဗုဒ်ဓဟူးသားသမီးတဈဦးနှငျ့ စပျပွီးထိုးပါ။ ကျောရညျခေါကျဆှဲစားပွီးထိုးပါ။
သောကွာနေ့ နလေ့ညျ(၁၂)နာရီ – (၁)နာရီ (၃၀)အတှငျး အစိမျးရောငျမြားမြားပါသော အဝတျအစားဝတျဆငျပွီထိုးပါ … ။ ( ၄ ၊ ၁ ၊ ၂ ) မြားမြားပါတဲ့ လကျမှတျကို ရှာပွီးထိုးပါ။
စနသေားသမီးမြား – သတငျးစာတဈစောငျထဲမှာ ထီပေါကျဂဏနျးရှိနပေါတယျ။ သောကွာသားသမီးတဈဦးနှငျ့ စပျပွီးထိုးပါ။ အုနျးသီးပါတဲ့မုနျ့စားပွီးထိုးပါ ။
စနနေေ့ နံနကျ (၇)နာရီ (၃၀) မှ – (၉)နာရီအတှငျး အပွာရောငျမြားမြားပါသော အဝတျအစားဝတျဆငျပွီထိုးပါ ။ ( ၆ ၊ ၄ ၊ ၃ ) မြားမြားပါတဲ့ လကျမှတျကို ရှာပွီးထိုးပါ။
အကြွေးကျန် မရှိတဲ့ လစဉ် မီတာဖြတ်ပိုင်းနဲ့ အကြွေး လာတောင်းလို့ လျှပ်စစ်ရုံးမှာ တည့်ရှင်းနေတဲ့ အမျိုးသား ( ရုပ်သံ )
အကြွေးကျန် မရှိတဲ့ လစဉ် မီတာဖြတ်ပိုင်းနဲ့ အကြွေး လာတောင်းလို့ လျှပ်စစ်ရုံးမှာ တည့်ရှင်းနေတဲ့ အမျိုးသား ( ရုပ်သံ ) အစိုးရသစ် လက်ထပ်မှာ တိုးတက်မှုတွေ ရှိသလို ဆုတ်ယုတ် မှုတွေလည်း ရှိပါတယ်..နိုင်ငံရဲ့ အဆက်ဆက် အစိုးရရဲ့ လက်ကျန် တွေကို ရင်စီးခံ နေရတဲ့ အစိုးရသစ် လက်ထက်မှာ..မီတာခပြသနာဟာ နေရာတိုင်း မြို့ရွာတိုင်း မှာ ပြသနာတွေ တက်ပြီး အဆင်မပြေမှုတွေ တရဆက် ဆိုသလို ဖြစ်ပွား နေတာပါ… အခုဆိုရင် မြဝတီမြို့ မီတာရုံး အကြွေး မရှိတဲ့ လစဉ် မီတာဖြတ်ပိုင်းတွေ ရှိနေလို့ပေါ့ဗျာ ။ မီတာဆောင်ရင် သတိထား ကြပါဗျို့ ပြည်သူများ …
( ၁၁ ) နှစ်သမီး ကို ချစ်ကြိုက် ခိုးယူ ပေါင်းသင်း မိ လို့အမှုဖွင့် ခံ ရ သူ
( ၁၁ ) နှစ်သမီး ကို ချစ်ကြိုက် ခိုးယူ ပေါင်းသင်း မိ လို့အမှုဖွင့် ခံ ရ သူ အ မှုဖြစ်စဉ်မှာ ၈.၇.၂၀၂၀ ရက် နံနက် ၀၀နာရီ ၁၀ မိနစ် အချိန်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊မြောက်ပိုင်းခရိုင် ၊ လှိုင်သာယာ ( အရှေ့ ) ရဲစခန်းတွင် ဒုရဲမှုး စန်းယု စခန်းမှုး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်ဒေါ်…….( ၂၈ ) နှစ် ၊ ကုန်စိမ်းရောင်း ၊……လမ်း ၊ လှိုင်သာယာ ( အရှေ့ပိုင်း ) မြို့နယ် နေသူက ၎င်းသည် ၇-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့လည် ၃ …
မိသားစု ၅ သန်း ၄ သိန်းကျော်ကို ငွေသား ၂ သောင်းကျပ် စီ နိုင်ငံတော် က ပေးအပ် ထောက်ပံ့မည်ဟု အတိုင်ပင်ခံ ပြော
မိသားစု ၅ သန်း ၄ သိန်းကျော်ကို ငွေသား ၂ သောင်းကျပ် စီ နိုင်ငံတော် က ပေးအပ် ထောက်ပံ့မည်ဟု အတိုင်ပင်ခံ ပြော သတင်းကောင်း လေးပါ …. မိသားစု ( ၅ ) သန်း ( ၄ ) သိန်းကျော် ကို ငွေသား ( ၂ ) သောင်း ကျပ်စီ နိုင်ငံတော် က ပေးအပ် ထောက်ပံ့ မည်ဟု အတိုင်ပင်ခံ ပြော မိသား စု ၅ သန်း ၄သိန်းကျော် ကို ငွေသား ၂ သောင်းကျ …
This Year : 251368
Total Users : 546501
Total views : 2424643